हिरो हिरोइनका दुःख - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
देख्नलाई सेलिब्रिटीको जिन्दगी भव्य र शानदार देखिन्छ । मिडियाले पछ्याइरहेको हुन्छ, फ्यानहरूले अटोग्राफ लिइरहेका हुन्छन्, समाजमा उनीहरूको प्रतिष्ठा हुन्छ । तर, देखिएका कुरा सबै सत्य हुँदैनन् । भोकभोकै सुटिङ गर्नुपर्छ, बिरामी परेको बेला पनि आराम गर्न पाइँदैन, अनि आफ्नाबारे छापिएको कुनै झुटो समाचारका कारण तनाव बेहोर्नुपर्छ । अनिल यादवले सेलिब्रिटीका दुःखको सूची तयार पारेका छन् ।
घरमै बसिरहेका बेला अनमोल केसीको मोबाइलको ब्यालेन्स सकिन्छ । हाफपाइन्ट लगाइरहेकै सामान्य अवस्थामा उनी रिचार्ज कार्ड किन्न नजिकैको पसलमा पुग्छन् । पसलेसँग रिचार्ज कार्ड किन्न भ्याएका हुन्नन्– उनका फ्यानहरू उनलाई देखिहाल्छन् र घेरिहाल्छन् । अवस्था जस्तोसुकै होस्, हुलिया जस्तोसुकै होस्– फ्यानलाई खुशी बनाउन उनी फोटो खिच्न तयार हुनुपर्छ ।
भोकभोकै अवस्थामा केकी अधिकारी साथीको पार्टीमा पुगेकी हुन्छिन् । थालमा खाना लिएर टेबलमा बस्नैलाग्दा उनका प्रशंसक उनको छेउमा टुप्लुक्कै आइपुग्छन् । फोटो खिचौँ न प्लिज ? माया गर्नेहरूको आग्रह उनी नकार्न सक्दिनन् । फोटो खिचाउनेहरूको ग्रुप त्यहाँ जम्मा भइसक्छ । पालैपालो फोटो सेसन हुन थाल्छ । टेबलमा खाना सेलाइसक्छ, भोकले पेट कराउन थाल्छ । त्यही पनि उनी आफूलाई सम्हाल्न तयार हुनुपर्छ ।
रेखा थापाको ज्यानलाई सञ्चो हुँदैन । तर, फिल्मको सुटिङको सेड्युल टाइट हुन्छ । बिरामी शरीरमै भए पनि उनले एक्सन सिन दिनुपर्छ । फिल्मको भिलेनलाई फ्लाइङ किक हान्नुपर्छ । शरीरलाई जस्तोसुकै गाह्रो भइरहेको नै किन नहोस्, उनमा स्फूर्ति हुनुपर्छ ।
कलाकार अर्थात् सेलिब्रिटी भन्नेबित्तिकै सोचिन्छ– उनीहरूको जीवन भव्य होला । जस्तो रिल लाइफ, त्यस्तै होला रियल लाइफ । हाँसीखुशी देखिन्छन् सधैँ । उनीहरूको जिन्दगीमा सुखैसुख होला, आनन्द नै आनन्द होला ।
तर, वास्तविकता अर्कै हुन्छ । अझ नेपाली कलाकारको हकमा त्यसरी अनुमान लगाउनु तर्कसंगत हुँदैन । कलाकार भइसकेपछि उनीहरूले भोग्ने दुःखका कथा र व्यथा अनेक छन् । उनीहरूका पीडा अरूका भन्दा फरक छैनन् ।
अभिनेत्री रेखा थापा ग्ल्यामर क्षेत्रको जिन्दगी रंगिन हुन्छ भन्ने बुझाइको समर्थनमा छैनन् । एक दशकअघिदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय उनी भन्छिन्, ‘हामी त अरूलाई रङ दिएर आफू चाहिँ रङहीन जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छौँ । रंगिन त देखिने मात्र हो, खासमा त हाम्रो कुनै रङ हुँदैन । न मानलाग्दी खान पाउँछौँ, न सुत्न । हामीलाई धेरै जिम्मेवारीले बाँधेको हुन्छ ।’
भोक न तिर्खाको जिन्दगी
तात्तातो खान मन कसलाई हुँदैन र ? कलाकारको पनि आममान्छेको भन्दा फरक मन त पक्कै हुँदैन । तर, कुनै कार्यक्रम, पार्टी या आफ्नै फिल्मको प्रेस मिटमा पुग्दा नेपाली कलाकारहरू यो चाहनाबाट वञ्चित भइरहेका भेटिन्छन् । ‘फ्यानहरूलाई हामी उनीहरूले चाहेको बेला उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहना हुन्छ,’ अभिनेत्री केकी अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यसैले मसँग धेरैपल्ट यस्तो भएको छ । कहिलेकाहीँ त फोटो खिचाउँदा र इन्टरभ्यू दिँदादिँदै खानै सकिसकेको हुन्छ । अनि, भोकभोकै घर फर्किनुपर्छ ।’
अभिनेता भुवन केसीले पनि यस्तो अनुभव धेरै गरेका छन् । ‘साथीभाइको पार्टीमा रमाइलो गर्न जाऊँ न भनेर गइएको हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘प्लेट लिएर खान बसेको हुँदैन, फ्यानहरू माया गरेर फोटो खिच्न आउनुहुन्छ । मासु चपाउँदाचपाउँदै फोटो खिच्न तयार हुनुपर्छ । नाइँ भन्न मिल्दैन । त्यसैपछि त पालैपालो फोटो खिच्ने क्रम सुरु हुन्छ । र, खानै खान नमिल्ने स्थिति हुन्छ ।’
हलमा पुगेर फिल्म हेरिसकेपछि एक शब्दमा कमेन्ट गरेजस्तो सजिलो छैन, कलाकारको जिन्दगी । ‘भोक न तिर्खा भनी काम गर्नुपर्ने रहेछ,’ छोटो समयमै चर्चा बटुलेकी अभिनेत्री साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह भन्छिन्, ‘हामी दुई घण्टाको फिल्मका लागि महिनौँ पेलिन्छौँ । कहिल्यै टाइममा खान पाइँदैन । कहिले भोकभोकै सुटिङ गर्नुपर्छ ।’
गसिपले दिने तनाव
कलाकारका विषयमा मिडियामा गसिप बन्छन् । उनीहरूका पहिरनका चर्चा हुन्छन्, अफेयरका चर्चा हुन्छन् । उनीहरूमाथि बन्ने यस्ता गसिपले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ ? परिवार र आफन्तमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ? त्यसप्रति कसैको चासो हुँदैन ।
विभिन्न गसिपका कारण चर्चामा आइरहनेमध्ये पर्छिन्, अभिनेत्री रेखा थापा । उनको अफेयरदेखि मृत्युसम्मका हल्लाहरू बजारमा भए । ‘गसिपले दर्शकलाई इन्टरटेन गर्ला,’ रेखा भन्छिन्, ‘लेख्नेका पनि आफ्ना बाध्यता होलान् । त्यसैले गाली गर्न मिल्दैन । तर, कहिलेकाहीँ गसिपले परिवारमा ठूलो तनाव निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ केही महिनाअघि मात्र केही ब्लगहरूमा ‘रेखा थापाको मृत्यु’ भनेर अफवाह फैलिएको थियो । त्यसले रेखाका शुभचिन्तक र आफन्तजनलाई ठूलो तनाव दिएको थियो । ‘हाम्रा पनि आफन्त हुन्छन्, परिवार हुन्छ, त्यसरी जे पाए त्यही लेख्न त भएन नि,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला मलाई थुप्रै कल आएका थिए । आफन्तहरू साह्रै चिन्तामा परेका थिए ।’
फिल्म क्षेत्रसँग राम्ररी परिचित पनि हुन नपाउँदै अभिनेत्री रजनी केसीले गसिपका कारण भोग्नुपरेको ठूलो तनाव उनले कहिल्यै बिर्सिन्नन् । उनी निर्माता छविराज ओझाको फिल्म ‘लोफर’बाट दुई वर्षअघि डेब्यू भएकी हुन् । त्यतिबेला उनको निर्माता ओझासँग अफेयर रहेको गसिप बाहिर आइदियो । त्यही बेला उनको घरमा बिहेको कुरा चलिरहेको थियो । केटाहरू माग्न आइरहेका थिए । विभिन्न नयाँ–नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्ने अफर आइरहेका थिए । तर, त्यही गसिपका कारण उनलाई शंकाको दृष्टिले हेरियो । ‘फिल्मकर्मीसम्मले गलत नजरले हेरे,’ रजनी दुःख पोख्छिन्, ‘त्यही कारण आफन्त, साथीभाइ सबैले यो क्षेत्र छोड्न आग्रह गरे । यति भई–भई पनि किन यही काम गर्छस्, यसले तेरो भविष्यको सम्बन्धमा असर गर्छ, काममा असर गर्छ भनेर सम्झाए । तर, पनि म सम्हालिएँ । ममी त समझदार हुनुहुन्थ्यो । तर, अरूलाई ‘त्यस्तो होइन’ भनेर सम्झाउँदा सम्झाउँदा हैरान भएको थिएँ ।’
गसिपकै कारण अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि तनाव बेहोरिन् । डेढ वर्षअघि उनले आफ्नो एउटा प्रोफाइल फोटो चेन्ज गर्दा त्यही फोटोलाई लिएर एउटा अनलाइनले गसिप बनाएछ– ‘सन्नी लियोनजस्तै बन्दैछिन् वर्षा ।’ गसिपमुनि धेरैले जथाभावी कमेन्ट र भद्दा गाली गरेका थिए । वर्षा त्यतिबेला एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङमा थिइन् । ‘तेरो बारेमा यस्तो आको छ भनेर साथीभाइले खबर गरे,’ वर्षाले सम्झिइन्, ‘मलाई पनि धेरै कल आयो । घरबाट पनि परिवारको, आफन्तको कल आयो । एकदमै डिस्टब्र्ड भएँ । कामै गर्न सकिनँ । त्यो गसिपको शीर्षकले मात्र गलत आशय दिन्थ्यो, भित्र कन्टेन्ट त्यस्तो नराम्रो केही थिएन । तर, हुनु तनाव भयो ।’
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको पहिरनलाई लिएर बन्ने गसिपप्रति दुःखमनाउ छ । ‘हामीलाई थाहै नभईकन शरीरको कुनै भाग एक्सपोज भएकोे हुन्छ र त्यही कुरालाई कुप्रचार गर्दा दुःख लाग्छ,’ करिश्मा भन्छिन्, ‘त्यतिबेला अब न खण्डन गर्नु, न झगडा गर्नु । चुप लाग्नुपर्छ । त्यही पनि हाम्रो मानसम्मानमा असर त पुगिरहेकै हुन्छ नि । मानसिक तनाव पनि हुन्छ । परिवारमा पनि तनाव हुन्छ ।’
केही महिनाअघि मात्र अभिनेत्री साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो जन्मदिनमा ब्वाइफ्रेन्ड सार्वजनिक गरेको भनेर गसिप आएको थियो । ‘फिल्म लाइनमा आउनुअघि नै यो सब हुन्छ भनेर त मलाई थाहा थियो,’ साम्राज्ञी भन्छिन्, ‘त्यही पनि यसरी अरूका सम्बन्धमाथि गसिप बन्दा मन त दुख्छ नै । अनमोल केसीसँग काम गर्दा ऊसँग पनि हल्ला चलेकै हो । आज एउटासँग, भोलि अर्कोसँग चल्ला । त्यही भएर मलाई सोध्ने मेरा परिवार र साथीभाइलाई ‘भविष्यमा अरूसँग पनि अफेयर छ भनेर हल्ला हुन सक्ला, सुन्नलाई तयार हुनुस्’ भन्दिन्छु ।’